Ọrụ Kachasị Mma nke Ọrụ
NO : https://www.hebergementwebs.com/nettsted/best-registrerte-agent-tjenester
Steeti ọ bụla nwere ọrụ iwu kwadoro maka azụmaahịa inwe ụlọ ọrụ edebanyere aha. Nke a bụ eziokwu maka mmalite, obere azụmaahịa, LLC, na ụlọ ọrụ.
Kedu ihe nnọchi anya debanyere aha?
Ọrụ ndị a na-enyere aka hụ na nrube isi zuru oke na steeti gị n'oge mmalite na ogologo oge nke ọrụ gị. Ha dị n'oge awa azụmahịa iji jikwaa ndị ụlọ ọrụ gọọmentị na-ezitere gị ozi.
ilghara ịnọgide na-elekọta ọrụ ndị nnọchi anya nwere ike imebi azụmahịa gị. N'ọnọdụ ụfọdụ, steeti nwere ike igbari azụmaahịa maka ịhapụ ọrụ ndị nnọchi anya ya ga-agwụ.
Inụfọdụ steeti ị nwere ike ịrụ ọrụ dị ka onye ọrụ gị edebanyere aha gị. Mana nke ahụ pụtara na ị ga-eburu ibu ọrụ ndị a ma nọrọkwa na ya n'oge awa azụmahịa. Ọ na-ekpughepụkwa ozi nkeonwe gị n’ihu ọha, nke ọtụtụ mmadụ chọrọ izere. Ma ị na-amalite azụmaahịa ọhụrụ ma ọ bụ na ịchọrọ ịgbanwe ụlọ ọrụ edebanyere aha gị, akwụkwọ ntuziaka a ga - enyere gị aka ịchọta ọrụ ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ kachasị mma maka azụmahịa gị.
Top 6 Regent Agent Services
Onye na-edebanye aha na Northwest
- Ọrụ ndị ahịa kachasị mma
Gaa na Northwest RA Site $ 125
Nyefee Free Mail g Ntuziaka Companylọ Ọrụ
-kpụrụ Ọnọdụ jupụtara na
Na "ndị na-edebanye aha" na aha ahụ, ọ bụghị ihe ijuanya ịhụ
nọ n'ọkwa dị elu na ndepụta anyị.
Site na mbido azụmahịa gị iji jigide azụmahịa gị na ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ndị ọrụ ndị na-edebanye aha ndị na-eweta ọrụ a abụghị nke abụọ. Maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ, ndị nnọchi anya Northwest ga-abụ nhọrọ mbụ iji tụlee.
a> Ha nwere ihe niile ịchọrọ ma ọ bụ mkpa site na ọrụ ndị ọrụ edebanyere aha. Atụmatụ ahụ gụnyere uru dịka:
-dị ọkwa ejupụtara
Ihe ncheta akụkọ kwa afọ
Nyocha akwụkwọ na nchekwa
Ọrụ onwe onye n'ịntanetị nweta
Ntugharị ozi na-akwụghị ụgwọ
Otu ụbọchị nyocha mpaghara
You ga-enwetakwa nkwado ndụ site na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ndị edere na Northwest Ndị ọkachamara n’ahịa a ga - enyere gị aka ịmalite ma jigide azụmahịa gị site na nkwado gafere ọdịnala ọdịnala nke onye na - edebanye aha ya.
Ọrụ a na-efu $ 125 kwa afọ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ onye nnọchi anya edebara aha na steeti ise ma ọ bụ karịa, ọnụego ahụ na-ada na $ 100.
Bido na onye nnọchite anya Northwest taa
# 2 - Incfile - Ọrụ Kachasị N'enye Akaụntụ Ọrụ Free
Gaa na Faịlụ
Ndenye aha gị n'ụlọnga maka afọ 1 Ọhụrụ na $ 119
Ntugharị na-akpaghị aka
Email na SMS alerts
Incfile bụ ọrụ okike azụmaahịa nwere ọtụtụ onyinye. Ihe karịrị azụmaahịa 500,000 ejirila ya mee ihe n'ime afọ 15 gara aga.
Otu n'ime ihe kpatara Incfile ji bụrụ nke ewu ewu bụ na ị nwere ike iji ha nweta onye nnọchi anya debanyere aha n'efu.
Nke ahụ ziri ezi. Ọ bụrụ na iji Incfile iji mepụta LLC gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị, ị ga-enweta ụlọ ọrụ na - edebanye aha n'efu maka afọ mbụ. Naanị ị ga-akwụ ụgwọ steeti. na atụmatụ Platinum na-amalite na $ 149 na $ 299, n'otu n'otu. Mana ha atọ na-abịa na ụlọ ọrụ na - edebanye aha ha n'efu.
Nke a bụ lee ụfọdụ atụmatụ na ike nke ọrụ ụlọ ọrụ edebanyere aha Incfile:
Dị iji nweta akwụkwọ ozi IRS na usoro iwu na nnọchite gị
Email na SMS amara mgbe ị na-anata akwụkwọ
24/7 ịntanetị nweta
Dị mfe ma kensinammuo online dashboard
Akpaaka zipu ozi N'etiti izipu ozi na ịdọ aka na ntị, nke a bụ n'ezie ọrụ pụrụ iche. Ọ bụrụ n'ịdenye aha maka otu atụmatụ azụmaahịa ahụ, atụmatụ gị ga-agbanwe na ọnụego ahụ mgbe afọ mbụ gachara. ụgwọ steeti.
Lezie anya ịmalite azụmaahịa ma nweta ụlọ ọrụ na-edebanye aha na-akwụghị ụgwọ
site na Incfile.
# 3 - Swyft Filings - Agen servicesọtụtụ vasatail edebanye aha na
gaa na faịlụ Swyft
Ndị ọrụ debanyere aha na $ 149 Mfe dị mfe
nweta akwụkwọ ndị dị n'ịntanetị Nkwupụta nzuzo na nnabata ekwenye na
bụ aha ọzọ a maara nke ọma ma tụkwasị obi na ụlọ ọrụ na-edebanye aha ụwa. Ha na enye oru ndi LLC, C-Corps, S-Corps, na ndi otu anaghi aru oru. nhọrọ iji tụlee. Swyft Filings edebanye aha ọrụ ndị nnọchi anya dị na steeti 50 niile.
> Ibido dị mfe. Naanị mezue akwụkwọ ntanetị dị n'ịntanetị ịdebanye aha. Ozugbo ị debanyere aha gị, Swyft Filings na-eji teknụzụ akpaghị aka nke na-ezitere gị ihe ncheta oge iji hụ na nnabata.
Ọrụ ahụamalite na $ 149 wee megharia na akpaghị aka. Yabụ ị gaghị echegbu onwe gị maka ọrụ gị na-agwụ. jiri nlezianya lelee akwụkwọ ndị gọọmentị nke ndị ọrụ gị debanyere aha na ntanetị. Ọrụ a nwere nchebe, ntụkwasị obi ma na-echebe nzuzo gị. Nchịkọta ndị a bidoro na $ 49 gbakwunye ụgwọ steeti. Agbanyeghị, esonyeghị ndị ọrụ edebanyere aha na ọrụ ndị a.
Gaa na ZenBusiness
Site $ 99
Gụnyere atụmatụ ọzụzụ
Accessnweta akwụkwọ ndị dị n'ịntanetị Nzuzo na Nchebe
ZenBusiness bụ otu n'ime aha ndị kachasị ewu ewu na aha ọma na ngalaba azụmaahịa azụmaahịa. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ a maara nke ọma maka ọrụ nhazi LLC ha, ha na-enyekwa ọrụ ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ mara mma. Ọ bụrụ na ị na-eji ZenBusiness ịmalite LLC gị, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịnweta ndị ọrụ na-edebanye aha ha.
ọrụ ndị nnọchi anya ndị a edebanyere aha ga-ahụ na nrube isi nke gị .Lọ ọrụ. Ọ na-agbakwụnye nchekwa na nzuzo na azụmahịa gị.
ZenBusiness ga-anabata akwụkwọ iwu niile dị mkpa na gị Ihe niile ga-ebugo na dashboard a haziri ahazi n'ịntanetị ka ị wee lelee, bipụta. Ma ọ bụ budata ya n'oge ọ bụla. Ọrụ ndị ọrụ edenyere aha na-amalite na $ 99 kwa afọ.
Ma ọ bụrụ na ị na-eji ZenBusiness amalite gịDị ka ụlọ ọrụ, a na-etinye ọrụ ndị nnọchi anya ha na atụmatụ ọ bụla. Atụmatụ ndị a na-amalite na $ 129, ya mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ijikọkọtara ọnụ ọrụ ahụ. > # 5 - MyCorporation - Ezigbo maka obere azụmaahịa
Na-amalite na $ 120
nkwụnye ego EIN na ọzụzụ
RA gụnyere ụfọdụ nchịkọta ọzụzụ
anọwo ihe karịrị afọ 20. Kemgbe 1998, ha enyerela aka ịmepụta ihe karịrị otu nde azụmaahịa na steeti 50 niile. Dịka onye ọsụ ụzọ na onye isi na ụlọ ọrụ a, ọrụ ndị nnọchi anya MyCorporation zuru oke maka obere azụmaahịa mmalite.
ịmalite dị mfe. Naanị gaa na weebụsaịtị ma dejupụta ngwa ngwa site naahịrị. MyCorporation na-enye ọrụ ndị nnọchite anya edebanyere aha maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Hazie akwụkwọ gị
Nyefee ndị nwe iwu akwụkwọ iwu
Tinye nzuzo Nata ọrụ nhazi maka azụmahịa gị mgbe 'iwu kwadoro
ọrụ na MyCorporation na-amalite na $ 120. Ọnụego ahụ na-emezigharị na-akpaghị aka kwa afọ. Younwekwara ike itinye MyIncGuard na atụmatụ gị, nke gụnyere ncheta na ngwa ọrụ n'ime afọ niile. Ndị a na-amalite na $ 224 na $ 324, n'otu n'otu. Ọ bụrụ n ’iji MyCorporation bido azụmahịa gị,
ị ga-enweta nkwụnye ego EINn'efu
# 6 - MyCompanyWorks - Ezigbo maka ịgbanwe ndị nnọchi anya
Gaa na MyCompanyWorks
Na-amalite na $ 99
Enweghị mgbanwe na ụgwọ ndị ọrụ
ọzụzụ ụlọ ọrụ maka LLC na Corps
Nkwado Afọ Ojuju 100%
MyCompanyWorks bụ nhọrọ ọzọ a ma ama n'ọhịa nke azụmahịa. Ha na-enye ọzụzụ na ọrụ ndị ọrụ edebanyere aha maka LLC, c-corps na s-corps.
Kemgbe 2001, ihe karịrị ụlọ ọrụ 60,000 mba niile tụkwasịrị obi MyCompanyWorks maka ọrụ ha.
MyCompanyWorks na-enye ọrụ maka ndị nnọchi anya aha na steeti 50 niile. Ahụrụ m MyCompanyWorks n'anya n'ihi na ha dị ọtụtụ. Ọrụ ndị a zuru oke maka onye ọ bụla na-amalite azụmahịa ọhụrụ yana maka ndị nwe ụlọ ahịa na-achọ ịgbanwe onye nnọchi anya ha maka azụmahịa ha.Ọ dị melite
Ntinye ngwa ngwa maka nnyefe nke usoro, ụdị, wdg. 99 kwa afọ. Ọ bụrụ na azụmahịa gị amaliteworị ma ị na-achọ ịgbanwe onye ọrụ gị edebanyere aha, MyCompanyWorks adịghị. t ụgwọ ụgwọ maka mgbanwe ahụ.
Ndị ọrụ ndị nnọchitere aha ha sokwa na ngwugwu mmalite azụmahịa, bido na $ 279. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịgbakwunye ọrụ ahụ na atụmatụ ọzụzụ ndị ọzọ, nke na-amalite site na $ 79.
atụmatụ na-akwado nkwado ego ịkwụ ụgwọ ụbọchị 90
Otu esi achọtar ọrụ ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ kachasị mma maka gị
N'adịghị ka nkwenkwe ndị a ma ama, ọ bụghị ndị ọrụ ndị nnọchi anya aha niile bụ otu. Offọdụ n'ime nhọrọ ndị a dị mma karịa ndị ọzọ. Site na ọtụtụ nhọrọ ị ga-atụle, ọ nwere ike isiri gị ike ịchọta ụlọ ọrụ nnọchiteanya kachasị mma maka azụmahịa gị. Enwere ụfọdụ ihe ị ga-atụle mgbe ị na-enyocha ọrụ dị iche iche. Iburu ihe ndị a n’uche ka ị na-agagharị ga-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe:
ofdị Azụmaahịa Ahịa
Kedu ụdị azụmahịa ị na-amalite? Ma ọ bụ ụdị nhazi ị nwere ugbu a?
Ọtụtụ ndị ọrụ edebanyere aha ga-arụ ọrụ na ụdị ụlọ ọrụ niile, mana ụfọdụ dabara nke ọma na otu karịa nke ọzọ. Slọ ọrụ nwere ike ghara iji otu ụlọ ọrụ na-edebanye aha ha dịka S-Corp. Fọdụ ndị ọrụ edebanyere aha dị mma maka ụlọ ọrụ ịzụrụt Ọ bụrụ na ha na ụlọ ọrụ ndị yiri nke gị na-arụkọ ọrụ, nke a kwesịrị ịbụ ezigbo azịza. Chọọ ọrụ ga-ezitere gị SMS ma ọ bụ ihe ncheta email iji jide n'aka na ị gaghị echefu oge ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla ị chọrọ. Servicesfọdụ ọrụ sitere na ihe ndị ọzọ na ntuziaka nnabata. Ọ dị ezigbo mfe ịkọ ọdịiche dị n'etiti ọrụ ndị nnọchi anya edebanyere aha naanị nke kacha nta na ndị na-aga ogologo oge.
Nzuzo na Nche
Nzuzo bụ otu n'ime isi uru. onye debara aha ya n’akwụkwọ. A ga-edepụta adreesị onye debara aha ya n'akwụkwọ dị ka ndekọ ọha, ọ bụghị adreesị ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị. Akwụkwọ ndị ahụEnwere ike ịkwalite akwụkwọ ozi gọọmentị na nke gọọmentị site n'aka onye ọrụ gị debara aha gị. Fọdụ ga-enye ebugharị ozi na-abụghị naanị nchekwa nchekwa. Ndị ọzọ ga-eburu akwụkwọ ahụ na dashboard dị n'ịntanetị nke ị nwere ike ịnweta na nzuzo. Ọ bụ ihe ezi uche dị na iji naanị otu ụlọ ọrụ maka ọrụ abụọ ahụ. N'ezie, ọtụtụ ọrụ mmalite azụmaahịa ga-emekwa ka ị jiri ha dịka onye ọrụ edebanyere aha. Fọdụ ga-enye afọ maka ọrụ ndị nnọchi anya edebanyere aha mgbe ị debanyere aha maka atụmatụ mmalite. adịla ka ihe dị mkpaortant for you.
Ọnụahịa ndị ọrụ aha gị na-agbadata ihe ruru $ 100 kwa afọ. Nwere ike ịchọta ụfọdụ maka $ 50 karịa ma ọ bụ obere. Mana n'ikwu okwu n'ozuzu, ị gaghị akwụ ụgwọ karịa.
companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-eji ọka iwu ha dịka ndị ọrụ edebanyere aha. Mana ọ ga-efu ọtụtụ ihe karịa ma e jiri ya tụnyere ọrụ ndị enyocha na ntuziaka a. ruru arụmọrụ.
Onye ọrụ gị edebanyere aha kwesịrị ịnọ ebe ahụ iji nyere gị aka ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ enyemaka. nke a bụ akụkụ dị mkpa na nke anaghị eleghara anya nke ndị ọrụ nyocha ọrụ edebanyere aha. Ana m akwado ka ị gụọ nyocha ndị ahịa tupu ịme mkpebi ikpeazụ. Imirikiti ndị nyochaa kwuruga - enwe ihe jikọrọ ya na enyemaka (ma ọ dị mma ma ọ dị njọ). Okwu ndị a nwere ike inyere gị aka ịmegharị otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ma ọ bụrụ na ịnọ n'etiti nhọrọ dị iche iche. Ọ dabere na ihe ị na-achọ.
Onye na-edebanye aha na Northwest bụ nhọrọ kachasị elu maka ọrụ ndị ahịa ka ha na-agabiga na-egbo mkpa gị. Ihe ntinye na-enye ọrụ ndị nnọchi anya edebanyere n'efu mgbe ị debanyere aha maka ngwugwu mmalite azụmahịa. Swyft Filings na-ezube ịnabata ụdị ụlọ ọrụ azụmahịa niile.
Ọ bụrụ na ị na-etolite LLC, lelee ọrụ ndị ọrụ edebanyere aha site na ZenBusiness. Obere ulo oru kwesiri itughari aka na oru MyCorporation. Maka ndị gị na-achọ ịgbanwe ndị ọrụ edebanyere aha, MyCompanyWorks anaghị ana ego ndị ọrụ mgba ọkụ.
N'agbanyeghị ụdị azụmahịa gị ma ọ bụ bỌ bụrụ otu a, ịnwere ike ịchọta ọrụ ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ kachasị mma maka gị site na isoro ndụmọdụ dị na ntuziaka a. >
The Complete Guide to weebụsaịtị Atụmatụ
2021-06-16 04:34:49 | Weebụsaịtị
Ngosipụta: Ndị na-agụ akwụkwọ a kwadoro ọdịnaya a nke pụtara na ọ bụrụ na ị pịa ụfọdụ njikọ anyị, anyị nwere ike ịnweta ọrụ. Ma ị na-amalite blog, saịtị nkeonwe, ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa, ntuziaka a ga-egosi gị ụfọdụ ndụmọdụ ngwa ngwa iji mee ka atụmatụ atụmatụ weebụsaịtị gị dị mfe karị. An...
Otu esi emepụta mpempe akwụkwọ ntanetị na-erughị nkeji 10
2021-06-16 01:39:14 | Weebụsaịtị
Chọrọ ịtụgharị ndị ọbịa ọzọ na ndị debanyere aha site na iji mpempe akwụkwọ dị n'ịntanetị? posts iji lelee ndị ọbịa abanyelarị na ọdịnaya gị. Ka anyị banye n'ime nkuzi ahụ. ...
Kedu ihe bụ span na html?
2021-06-13 20:08:46 | Weebụsaịtị
N'ime ọtụtụ HTML nke ị ga-ezute na njem gị iji mụta njedebe, njedebe bụ nke ị ga-ahụ ọtụtụ mgbe. Mana, n'adịghị ka ihe ndị ọzọ, mkpado naanị anaghị emepụta otu ụdị mmewere peeji. Na mbu, ọ nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya: gini bụ ihe dị ka ọ dị ezigbo mma? Ọ na-apụta nke ukwuu. Span ọcha na-enye nd...
17 Musician Ndebiri Ndepụta Maka Ndị Na-abụ Abụ & Ndị Band 2021
2021-06-13 11:57:41 | Weebụsaịtị
Y’oburu na ibu onye nka n’egosiputa onwe ya site na olu ndi ozo, ndebiri webusaiti ndia g’esi diri gi nma. Ngwa ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma iji wuo nnukwu weebụsaịtị iji kwalite egwu gị na ụwa Onye ọ bụla na-eme ya na mpaghara ya ma dịrị ndụ ugbu a, ọ bụ oge iji bulie ihe ole na ole wee banye n'ịnt...
15 kachasị mma WordPress plugins 2021
2021-06-12 18:14:42 | Weebụsaịtị
Ma ị na-amalite ma ọ bụ na ị nwetala traction, yana WordPress plugins ị nwere ike monetize gị na peeji nke na-eme ka ọ na-enye ego. Ma ọ bụrụ na ọ bụ blog nwere ọdịnaya na-enweghị atụ, usoro nhazi usoro, ma ọ bụ azụmaahịa dabere na ndenye aha, ihe ọ bụla ị ga-eme, site na iji ngwa mgbakwunye ziri ez...
15 n'ime ezigbo weebụsaịtị mmekọrịta + otu esi eme nke gị
2021-06-11 17:41:35 | Weebụsaịtị
Ezubere ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma na ndị ọrụ n'uche. Ebe nrụọrụ weebụ na-emekọrịta mmekọrịta na-eme nke ọma na nhazi nke onye ọrụ. Ọ bụghị naanị na ahaziri ha ọchị ma na-atọ ụtọ, ha na-enyekwa ndị ọrụ aka ịchịkwa ahụmịhe ha ma duru ha gaa na ozi ha chọrọ. ...
Kedu ihe bụ 'oge' na html?
2021-06-11 17:39:23 | Weebụsaịtị
N'ime ọtụtụ HTML ihe ị ga-ahụ na njem gị iji mụta njedebe ihu, oge bụ otu ị ga-ahụ ọtụtụ mgbe. Mana, n'adịghị ka ihe ndị ọzọ, mkpado naanị anaghị emepụta otu ụdị mmewere peeji. Na mbu, ọ nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya: gịnị bụ otu ihe maka n'ezie? Ọ na-apụta ọtụtụ. Ihe dị iche iche Spanish na-enye...
7 Nna Daybọchị Nkwalite echiche iji mbo mbuli Summer
2021-06-10 20:59:06 | Weebụsaịtị
Na-achọ kacha mma Nna Day nkwalite echiche mbo mbuli gị online ụlọ ahịa ahịa, Nna Day aghọwo a na-ewu ewu ezumike na-eme ememe gburugburu ụwa. Ọ bụ ohere ụmụaka niile nọ n'ọgbọ iji mee ememme nna niile n'ebe ọ bụla. Ma nke gị, nke ahụ pụtara na ọ bụ ezigbo ihe kpatara ị ga-eji nwee ire ere ezumike b...
Olili ozu ulo na ọrụ wordpress Isiokwu 2021
2021-06-10 12:25:24 | Weebụsaịtị
Ndụ dị mkpụmkpụ, ya mere, ọ kachasị mma iji oge e nyere anyị rụọ ọrụ dị ka o kwere mee. Ọ bụ ya mere na anyị agaghị agwa gị uru niile nke WordPress dị ka CMS mana kama ilekwasị anya na uru ndị dị na isiokwu ndị a kwadebere n'okpuru. gosipụtara na ọ bụ ihe siri ike na nke kachasị ewu ewu...
16 kacha mma woocommerce na-eweta nnabata 2021
2021-06-10 12:18:26 | Weebụsaịtị
Are nọ ebe a ịhọrọ site na WooCommerce weebụ kachasị mma maka nnukwu ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Mgbe ọ na-abịa na ịmalite WooCommerce kwadoro eCommerce na ebe nrụọrụ weebụ, isi nkesa Bochum nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kachasị mma maka gị. N'ụzọ dị mma, ụlọ ọrụ weebụ ọ bụla ị hụrụ na ndepụta dị n'okpuru...
Ezigbo ụlọ 10 maka ndị egwu, djs na otu na 2020
2021-06-10 12:12:55 | Weebụsaịtị
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ egwu na-asọ mpi, ị nwere ike ịrụ ọrụ nkwalite site na iji weebụsaịtị wee họrọ ndị ọbịa kacha mma. Goodkwado nke ọma n'ihe ị na-eme bụ otu ihe, mana ime ka ị mara onwe gị bụ isi dị iche. Ọ bụrụ n ’ekpugheghị onwe gị, tụmadị ma ọ bụrụ na ị nọ na mmefu ego, ọ dịghị onye ga-amata na...
Kachasị mma ịkekọrịta maka WordPress nke onye mbido
2021-06-10 12:06:02 | Weebụsaịtị
Hostinglọ ọrụ nnabata web na-eji otu ihe ahụ (ngwaike) nke sistemụ gị jiri akụrụngwa. Atọ njirimara ihe onwunwe karịsịa; ebe nchekwa (RAM), ike nhazi (CPU) na ohere diski na-akọwa ogo na ikike nke ọrụ nnabata gị Bochum Bochum - You nwere nkesa na akụrụngwa nke ihe nkesa ahụ na ọtụtụ weebụsaịtị. ...
10 kacha mma omenala nbanye peeji nke plugins maka wordpress 2021
2021-06-10 12:01:28 | Weebụsaịtị
Kedu ihe kpatara anyị ji azụrụ isiokwu WordPress? Maka na anyị achọghị ka saịtị anyị dị ka saịtị WordPress ọ bụla. Anyị chọrọ ka nke anyị pụọ iche. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe na gburugburu, gịnị ma ị banye na ibe nbanye? Iji ibe nbanye ahaziri ahaziri bụ otu n'ime isi ụzọ iji nye ahụmịhe onye ọrụ pụrụ ...
10 kachasị mma wordpress ederede maka ụlọ oriri na ọ restaurantsụ 20ụ 2021
2021-06-10 11:55:18 | Weebụsaịtị
Azụ mmiri ọhụrụ bụ ọnwụnwa dị ọcha nke nwere ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa na-enye sushi maka nri ehihie ma ọ bụ na-eme njem n'akụkụ ọzọ nke ụwa naanị ịnwale lobster ọhụrụ ejidere. Dika ichota ihe oriri bu ihe di oke elu, niche na-eto ngwa ngwa. N'ihi ya, ụlọ oriri na ọ seụafụ na-eme ka mmiri dị n'...
30 isi okwu ederede kachasi ike nke 2021
2021-06-10 11:52:53 | Weebụsaịtị
Bụ akụkụ nke azụmahịa oge ezumike na njem nleta adịghị mfe. Ndepụta nke ndị asọmpi dị warara nke na ị gaghị enwe ike ịchọta ohere maka ntọala gị na niche azụmaahịa a. N'ihi ya, ma na-abụghị nke ahụ, ndị ahịa na-ahọrọ nwere oke ụkpụrụ ụkpụrụ na-esiri ike iru. N’ịtụle ihe a niile, anyị enweghị ike inw...